Kahortagga dhimashada ka dhalata shilalka hafashada (Dabaasha) . - NorSom News
Qoraha maqaalkan: Abdihakim Abdullahi(Aabe Soomaali ah oo Norway kunool).
Waxaa is xasuusin mudan, muhiimad wayna leh in la badbaadiyo nafta ubadkeena, laguna dadaalo sidii looga hortagi lahaa, loona yareyn lahaa khtarta la xiriirta mowduuca kor ku xusan. looguna diyaar garoobi lahaa shilalka dhimasho ee ka dhasho dabaabsha/hafashada . Dalkani Norway waxaa sanadkii ku dhinto dad tiradoodu ku dhawdahay 90 sababo la xariiro hafashada ama dhimashada sabab u noqto dabaasha.
Waxaa nagu soo food leh amaba bilaabatay xilliga xagaaga (sommerka). Bilaha (Mai, juni, juli, iyo waliba august) ayaa waxa ay ay yihiin bilaha ugu badan ay dhacaan shilalka dhimasho ee la xariira hafashada ama dabaasha. Hadaba waxaa iswaydiin iyo is xasuusin mudan sidee looga hortagi karaa, khatarta loo yareeyn karaa?
Dalkani Norway waa dal ay ku wareegsanyihiin biyo fadhiyo, bad, wabiyaal, waxaa la galaa xilli kulayl taas oo qof kaste uu u dhawaado ama raadiyo meel uu isku qaboojiyo. Dhalinyaro badan waxaa caado u ah in ay ku dabaashaan badda, biyo mareenada amaba wabiyada. Ayada oo taasi ay ka dhalato shilal dhimasho haddii dhalinyaradaasi aysan ahayn kuwo dabaasha si fiican u yaqaano amba aan samaynin feejignaan aad u sareeyso. Dhalinyaro kaste oo is raacdo isku mid kama ahan heerka aqoon ee dabaal, midka ku fiican dabaasha waxaa la socdo kuwo badan oo aan sidaa ugu fiicnayn, balse ku dayanaayo kan fiican.
Sanadkaan 2020ka afartiisa bilood ee ugu horeeysay dalkani Noway waxaa ku dhintay 19 qof, ayada oo waaxda badbaadinta ee (redningsselskapet) ay sheegtay in ay macquul tahay in sanadkaani dad badani tagi doonaan badda, wabiyada hadii jawiga uu aad u fiicnaado, ayada oo ay jirin dad fasax uga baxaayo dalka dibadsiia sababo la xariiro Covid-19 oo xiray safaradii dibadda.
«Badda, biyaha iyo wabiyadu waxa ay yihiin goobo qurux badan oo ku haboon nasashada iyo ciyaarta sanadka oo dhan dalka Noorway, Isla mar ahaantaa biyuhu waxay noqon karaan khatar haddii aadan taxaddarin, oo aad naftaada iyo dadka kale daryeelin», ayay tidhi Tanja Krangnes, oo ah madaxa bad-qabka ee waaxda samata-bixinta ee Norway.
Annga bulsho ahaan Somali hadaan nahay sanad kaste xlliga xagaaga ah dad ayaa ku dhinto tirada haba yaraatee. Hadaba waalidka haku dadaalo in uu dabaasho barto si caruurtiisa iyo naftiisaba u badbaadiyo, marka goobaha dabaasha la joogana waa in feegjignaan la muujiyaa, il biriqsi ayuu ku dhacaa shilalka hafashada.
Dabaasha waxa ay kamid tahay waxyaabaha ay diinteena na farayso in aanu baranno, caruurteenana barno, hadaba waa in dadaal dheeraad ah, kharash badan waalidka ku bixiyaa in caruurtiisa uu dabaasha baro, kaliya uusan ku halaynin barashada dabaasha ee iskuulka taas oo ah wakhti aad u kooban, aad u yar, gaar ahaan dadka dagan magaalooyinka waawayn oo wakhtiga barashada dabaasha uu aad u yaryahay marka loo eego dagmooyinka.
Waxaa aad u xun in aad joogto goob uu shil biyo ka dhaco oo aadan awoodin in aad badbaadiso qof aad ujeedo in naftiisa halis ku jirto, waxaana taasi sii darnaanaysaa marka qofkaasi uu yahay mid ka tirsan qoyskaaga, walaal ama waalidba midkuu noqdaba.
Aan ku daalno in aan baranno dabaasha, barno ubadkeena. Dabaasha waxa ay ka muhiimsantahay ayaa la dhihi karaa waxbarashada kale, maxaa yeelay qof wax kuu qoro, kuu akhriyo waad heleysaa, balse ma heleysid qof kuu dabaasho marka nafta ay halis gasho. Waxaa dadka dagan Norway fursad wayn u ah in ay heystaan goobo badan oo aku baran karaan dabaasha, ayada oo goobahaasi dib loo furaayo mar dhow hadaba dadaalkiina badiya ku aadan in aad barataan dabaasha aadna bartaan ubadkiina.
W.Q: Abdihakim Abdullahi, Qoraa & Aabe Soomaaliyeed.
Hadii aad rabto inaad fikirkaaga la qeybsato bulshada soomaaliyeed ee Norway, waxaad qoraalkaaga noogu soo diri kartaa cinwaanka: NorSomnews@gmail.com
Previous articleSolberg: Safar dibadda ah ma jiri doono, ilaa 20-ka August.
Next articleTrump: Waxaan qaataa daawada Malaariyada, si aan uga hortago Corona-virus.